Archives des Fantaro | Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany - MADAGASIKARA
Catégorie : Fantaro
Sehatra ifampizarana mikasika ny Aina sy famonjena ny fivavahana (Afafi) sy ny FIvondronana eokaristikan’ny tanora (FET).
Vakio ny tantaran’ny FET
Mankalaza ny faha 100 taonany ny FET. Hahafahana manomana ny 100 taona manaraka dia tsara ny mandalina ireo tranga niainan’ity fivondronana mamintsika loatra ity. Tsidiho ny http://mej2015.com/html/Francese/histoire.html. FET, miombom-po amin’ny Ray masina Iraka ampanaovin’ny...
Fantaro / FET Madagasikara
FET madagasikara, 95 taona nanarahan-dia an’i Jesoa
Sendra tany lonaka ny mpamafy ka namoa arivo heny ny Aina sy Famonjena ny Fivavahana sy ny Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora teto Madagasikara. Voa nahazo tany lonaka ny Fivondronana eokaristikan’ny tanora Niara-tonga tamin’ireo misiônera teto...
AFAFI / Fantaro
Ny AFAFI, fototra sy fiandohan’ny FET
Mifaningotra ary tsy azo sarahina ny AFAFI-FET. Loharano nipoirana sady aim-panahin’ny FET ny AFAFI; miaina, manapariaka ary mamelona ny AFAFI kosa ny FET. AFAFI, Aina sy Famonjena ny Fivavahana Fanazarantena hivelona amin’ny Finoana amin’ny...